चिसो मौसम मन नपराउने साम्राज्ञीलाई त्यहि मौसममा काम गर्दा कस्तो लाग्छ ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
चिसो मौसम मन नपराउने साम्राज्ञीलाई त्यहि मौसममा काम गर्दा कस्तो लाग्छ ?
व्यक्ति अनुसार रुचि पनि सबैको फरक फरक हुन्छ । कसैलाई के मन पर्छ कसैलाई के । सबैको रोजाई एउटै हुँदैन । यस्तै मौसमको कुरा गर्ने हो भनेपनि कोही गर्मी मौसम मन परराउँछन् त कोही जाडो । तर अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई जाडो मौसम फिटिक्कै मन पर्दैन । किनकी जाडो महिनामा उनको छालामा समस्या देखा पर्छ । हात खुट्टाको औँलाहरु सुनिने । छालाको रंग निलो हुने हुन्छ । तर जाडो मौसम मन नपराउने उनलाई सिनेमाको कामहरु भने प्राय जाडो मौसममा नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हालै मात्र उनले सिनेमा ए मेरो हजुर २ को लागि संसारकै अग्लो ठाउँ मनाङको तिलिचो तालमा माईनस ४ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा हट र बोल्ड अवतारका काम गरीन् । त्यसको अनुभवबारे बताउँदै उनले भनिन्, “एउटा अभिनेत्री भएपछि नगरी नहुने । गर्नैपर्यो नी । त्यो चिसो मौसममा काम गर्न त निकै कठिन थियो । चिसोले टाउकोमा पीडा हुन्थ्यो । पछाडिबाट केहीले हानेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो ।”
साम्राज्ञीले तिलिचो तालको छेउछाऊमा ए मेरो हजुर २ को गीतको सुटिङ गरेकी हुन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, नाजिर हुसेन र आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा “तिमी सँग” को टिजरलाई युट्युब दर्शकले रु..
साम्राज्ञीले भनिन्– ‘ए मेरो हजुर २’ बबाल भएको छ
धेरै दु:खले भेटिएकी हुन् ‘समर लभ’की ‘साया’
नेपाली सिनेमामा करोडका कलाकारको वर्चश्व
साम्राज्ञीसँग रोमान्स गर्न पाउँदा मख्ख नाजिर